Izifinyezo nezifinyezo eMessina
Izinsizakalo Kubantu Nezinkampani - Ukuzilibazisa nokuzilibazisa
Isitolo esisetshenziswe okusha, isitolo samakhophi, ukubhuka izincwadi okukhethekile ezifingweni nezifingqo zesayensi yemfundo
Umtapo wezincwadi a Messina I-chre ihlinzeka ngezifinyezo nezifinyezo zezifundo zeziqu ze- Isayensi Yezemfundo ngaphezu kokubhekana nokwakheka, ukuphrinta, ukubopha, i-thesis, ihluzo neminye imisebenzi eminingi yedijithali.
Izifinyezo nezifinyezo zemfundo nokuningi
Umtapo wezincwadi okuyisikhungo esidumile futhi Messina endaweni eyunivesithi ngiyabonga ngayo yonke insizakalo ewusizo enikeza abafundi beyunivesithi, ngokubhekisisa okuthile Isayensi Yezemfundo. Abasebenzi, empeleni, bayatholakala kubafundi i izifingqo kanye nezifingqo zezifundo eziningi zasenyuvesi futhi ikakhulukazi ezifundweni ezihlobene neFakhalthi ye Isayensi Yezemfundo kodwa futhi Ezomnotho e Umthetho. Izifingqo nezifingqo ziyatholakala ku-inthanethi ezilungele ukulandwa.
Izinsizakalo zedijithali, ukuphrinta nemidwebo eMessina
Umtapo wezincwadi che itholakala ku- Messina ukulahlwa kwetshe kusuka eMnyangweni Isayensi Yezemfundo futhi kuyiphuzu elisetshenziselwa eminye imisebenzi eminingi, kufaka phakathi: ukuphrinta, ukwakheka nokubopha tesi, ukuklanywa nokuphrintwa kwamakhadi ebhizinisi, izitembu, ukuhlinzekwa kwezinto zokubhala, izingqwembe namaflaya. Lapho Umtapo wezincwadi futhi kukwenzela nezinsizakalo zegalari ezihehayo, ezibonisa umsebenzi wakho ukunakwa imininingwane futhi kusetha ukwaneliseka kwamakhasimende njengenhloso esemqoka.
Izifingqo nezifingqo - Amakhadi ebhizinisi, amaflaya nezingqwembe
Izinsizakalo ezenziwe sitholakala yisikhungo Izifingqo kanye nezifingqo zibuye zifake nomkhakha wedijithali. Lapha empeleni kungenzeka ukuthi uphrinte amadokhumenti ngokuqondile kusuka ekushayweni kwepeni noma kuma-CD-ROMs. Izinsiza zemidwebo e stampa baphinde baqinisekise ukuthi kungenzeka ukuthi bakhe izinhlobo eziningi zemisho, ngombala omnyama noma ngombala, namaflaya, amapheshana, amakhadi ebhizinisi, izincwajana kanye nezingqwembe. Lapha ungaphrinta isithombe ekhadibhodi.
Ukuphrinta kwekhwalithi yomqondo
Il Isikhungo Sezindaba, sibonga iminyaka yesipiliyoni kulo mkhakha, manje sekunikela ngamaphrinta ahlukahlukene a I-Theisis, izembozo ezitholakala ngemibala eminingi nezinto zokwakha ngokuya ngokuthanda kwakho nezidingo zakho. Ukuhlelwa, ukubopha nokuphrinta kwe-thesis yakho kuzokwenziwa ngokunakekela, ikhono nokunakwa ngesikhathi ngasinye ngasinye ukukuqinisekisa umphumela omuhle.